वुहान अनुभूति : हरेक दिनपछि अर्को १४ दिन सुरु हुन्छ
नेपाल लाइभ शुक्रबार, माघ २४, २०७६, ०९:४६
कोठाभित्रै थुनिएर बसेको ९औं दिन भइसकेको थियो। त्यतिञ्जेल हामीलाई कोठाको बत्ती बाहेक अरु कुनै ठाउँबाट उज्यालो आउलाजस्तो लाग्नै छाडेको थियो। तर, १ फ्रेब्रुअरीको दिउँसो करिब ५ बजेतिर नेपाली दूतावासले सुरु गरेको विच्याट समूहमा एउटा उज्यालो छायो। सूचना थियो- ‘नेपालले वुहानबाट आफ्ना नागरिक उद्धार गर्ने। घर फर्कन इच्छुकले फर्म भर्नुपर्ने।‘
एकाएक अवस्था फेरिने भयो। हामीले उत्साहित हुँदै फर्म भर्‍यौं।
कहिले नेपाल फर्किन पाइएला भनेर तड्पिरहेका हामीहरु सबैले १०/१२ घण्टामै फर्म भरिसक्यौं। यहाँ रहेका करिब १८० जना मात्रै होइन, हाम्रा परिवार, साथीभाइ र शुभचिन्तकहरु सबैमाझ त्यो उत्साह विस्तारित भयो। कम्तीमा यो भयको अवस्थाबाट पार पाइने भइयो, आफ्नै घर फर्किन पाइने भइयो जस्तो लाग्यो।
दिन बित्दै गयो। एक, दुई, तीन... पाँच, छ दिन बित्यो। तर अहँ! घर फर्काइने बारे कुनै आधिकारिक सूचना आएन।
त्रासमा बस्न बरु अलि सहज थियो। कम्तीमा बाटो र विकल्प थिएन। तर, त्रासबाट निकाल्छु भनेर आश्वासन पाइसकेपछि पर्खाइमा बस्नु झन् धेरै पीडादायी हुँदोरहेछ।
चीनमा रहेको नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारले हामीलाई झुक्याएको छ।
सँगै पढ्ने विदेशी विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको सरकार र दूतावासले घर फर्काइसकेको छ। हाम्रै छिमेकी देश भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंकाले पनि आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लगिसकेका तीन दिनभन्दा बढी भइसक्यो।
हरेक स्वाभिमानी नागरिकको मनमा आफू जन्मिएको, नागरिकता लिएको र पासपोर्ट बोकेर हिँडेको मातृभूमि आफ्नो नागरिकहरुप्रति जिम्मेवार भइदियोस् भन्ने लाग्दोरहेछ। हरेक मध्यरातमा हामीले ‘कहाँ छ मेरो देश’ भनेर सोच्नुपर्दा दिक्क लाग्दोरहेछ।
नेपाल सरकारले मानोस् वा नमानोस, अधिकांश विद्यार्थीको मन र मस्तिष्कमा अहिले गहिरो चोट परेको छ। हरियो पासपोर्ट बोक्नुको अर्थ हराएको छ। कोरोना भाइरसले भन्दा हरियो पासपोर्टको शून्य ओझले बढ्ता त्रासदी दिएको छ।
विषम परिस्थिति र अवस्थाबाट भयभित हुँदा, आफ्नै देशको माटो देऊ, पानी देऊ, भविष्यको लागि आशा देऊ र बाँच्नको लागि सास देऊ भनेर माग्दै गर्दा पाइएन भने कुनै पनि नागरिकका लागि देश र देशभक्ति अन्तिम सत्य नहुँदो रहेछ।
गन्दागन्दै १६ दिन बित्यो। हामी अझै पनि एउटा कोठामा सीमित भइरहेका छौं।
तपाईं कोही पनि वुहान बाहिर बसेर यहाँको जनजीवन कल्पना गर्नसक्नुहुन्न। यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो दुस्साहस गर्न छाडिदिनुहोस्। यतिबेला हामीमध्ये अधिकांश छाक गनेर खाना खान बाध्य भएका छौं। पिउने पानीको समस्या छ। बाहिरको स्थिति २० बाट १९ भएको छैन। संक्रमणको दर झनै बढ्दो स्थितिमा छ। निस्कने माहोल छैन। त्रास उस्तै छ। समस्या झन्‌पछि झन् बढिरहेको छ।
हामीले जोहो गरेको तरकारी सकियो। केही गेडा आलु र रित्तिदै गएको चामल र दालका बट्टा हेरेर खान पुग्ने दिन गन्नुपरेको छ। बजारमा प्रोटेक्टिभ मास्कको अभाव छ। हामीसँग भएका मास्क र स्यानिटाइजर सकियो।
उपलब्ध भएकै कुरा पकाउन किचेन जानुपर्छ। इन्डक्सन चुलो र माइक्रोवेव छुँदा अरु कसकसले छोइसकेका होलान् भनेर डर लाग्छ। मुटु काँप्छ। फोहोर फाल्न माथिका तलाबाट पहिलो तल्लासम्म झर्नुपर्छ। हरेकपटक तल झर्दा र माथि चढ्दा लिफ्टको बटम छुनुपर्छ। कसैले कतै खोक्यो, हाँच्छ्युँ गर्‍यो भने तनाव बढिहाल्छ।
भाइरसको संक्रमणकालीन समय २ देखि १४ दिन भनिएको छ। वुहानले १४ दिन ‘आइसोलेट’ भएको दिन त काट्यो। हामीले पनि साथसाथै काट्यौं। तर, किचेन छिरेपछि, फोहोर फालेपछि, अर्को व्यक्तिलाई देखेपछि हाम्रो भने नयाँ १४ दिन सुरु हुने गरेको छ।
कोरोना भाइरसकै शंका गरिएका चिनियाँ नागरिक पोखराबाट सम्पर्कविहीन हुँदा चिन्ता नगर्ने सरकार यो लम्बेतान नाटक केलाई गर्दैछ? भाइरस पत्ता लागेपछि तर वुहान ‘लकडाउन’ हुनुभन्दा अगाडि यहाँबाट केही साथीहरु नेपाल आएका थिए। उनीहरुले हामी वुहानबाट आएका हौं, हाम्रो परीक्षण गर्नुपर्‍यो भन्दै स्वयं शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, टेकु जाँदा पनि, लक्षण देखिएपछि मात्रै आउनु, अहिले किन आएको भनियो। यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर पठाउने सरकार यही कुरामा यति गम्भीर छ भन्नु र देखाइनु ढोंग मात्रै हो।
यति भन्दै गर्दा, हामी सुरक्षित नै छौं, नेपालमा पनि हुनेछौं भन्ने अर्थ नलागोस्। हामी आफूलाई नेपाल पुगेपछि पनि १४-१५ दिन पूर्णरुपले क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्ने र सरकारले त्यसको व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्ने भनिरहेका छौं। होइन भने, सरकारले हामी कतिलाई संक्रमण भएपछि वा हामी कति मरेपछि लास र सास सँगै लैजाने सोचिरहेको हो, यकिन गरेर संख्या तोकिदिए हाम्रा बाँकीका दिन र रातहरु पर्खाइमा बित्ने थिएनन्।
देशमा स्रोत र साधन छैनन्। हो, छैनन्। तर, यस्तो विषम परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेरिरहेको अवस्थामा साधन जुटाउन नखोज्नु र नसक्नु एकदमै दयनीय र अक्षम्य छ। देश गरिब भएकोमा हामी जनताले केही माग्न हुँदैन है भन्ने जुन मनोविज्ञान स्थापित भएको छ, त्यो हट्नु जरुरी छ।
काल्पनिक गरिबी सिर्जना गरेर देश लुटिएको कयौं उदाहरण हामीलाई थाहा नभएको होइन। जनता गरिब हुन् तर देश गरिब छैन। गरिब जनताको पसिना निर्यात गरेर जुटेको राज्यको सम्पत्तिमा (अन्य कुरामा कलम थाती राख्दै) राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र वर्तमान तथा भूतपूर्व भिआइपीहरुले देश विदेशमा उपचारकै नाममा अरबौं दोहन गर्ने गरेको हामीले देखेकै छौं। यस्तो राष्ट्रले आफ्नै नागरिकले (अधिकांश विद्यार्थीहरु, जसलाई राष्ट्रका भविष्य हुन् भनिन्छ) विषम परिस्थिति भोगिरहेका छन्, उनीहरुले घर फर्किन चाहन्छु भन्दा १८० जनाको लागि बस्ने ठाउँको निर्क्यौल गर्न नसक्नु लाजमर्दो अवस्था हो।
चीनले २३०० शैय्याको दुई नयाँ अस्पताल बनाउने समयभन्दा बढी आफ्नो विद्यार्थी फिर्ता ल्याउन लगाउनु हदैसम्मको लज्जास्पद र हिनताबोध गराउने कुरा हो।
नजिकैको सयौंको चीत्कार सुन्दै नसुनेर बाहालवाला मन्त्रीले चीनमा रहेका नेपाली नागरिक समस्यामा नपरेको, तीन छाक खाना खुवाएर राखेको बताउँदै नेपालमा पनि आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले उद्धारमा बिलम्ब भएको भनिरहेका छन्। यस्तो सुन्दा, हामीलाई कथित 'सतिले सरापेको देशमा' दुर्भाग्यवश जन्मेका त हौं कि भन्ने महशुस भइरहेको छ।
व्यक्ति र व्यवस्थाले नागरिकको आपतमा उद्धारका लागि बिगुल फुक्दैन भने देशले कसकोचाहिँ भलो गर्छ? यस्ता प्रश्नले बारम्बार मस्तिष्कमा घोचिरहन्छ।
यो पीडा कुनै भौंतारिएर हिंडेको गल्लीको पागल प्रलाप होइन। कुनै सन्काहाको क्षणिक आवेग पनि होइन। यो आफ्नो नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार, अवहेलना गर्ने राज्य र व्यवस्थाले आशा, भरोसा र सपना कुल्चिएपछि निस्किएको एउटा विद्यार्थीको कठोर अभिव्यक्ति हो।